Mayelana Nathi - Izesekeli Zomholi
Sihlose ukusungula izinto ezintsha, sihlose ukujabulisa.
Sihlose ukuhlinzeka ngomkhiqizo wekhwalithi ephezulu ngenani elihle.
Nika amandla i-adventure yakho futhi wenze impilo engcono.
Njengoba igama layo lisho, sifuna ukuba umholi embonini, ukuze sinikeze amakhasimende ethu izinga eliphezulu kakhulu ngaso sonke isikhathi.
Saqala ibhizinisi lethu emashumini eminyaka adlule, okokuqala embonini Yezisekeli Zezimoto, sabe sesinwetshwa kwabangaphandle Nezemidlalo.Manje sinikezela ngemikhiqizo eminingi ukuze sifeze izidingo zamakhasimende ezihlukene futhi sanelise izifiso zamakhasimende ezihlukene.
Impilo imayelana nokuzamazama kanye nokuthola ukuthi singobani.Umholi umayelana nokulwela ukuzenza sibe ngcono futhi sisize amakhasimende ethu ukuthi aphile kangcono ekuhambeni kwawo.
Izesekeli zomholi zasungulwa ngo-2011, futhi eminyakeni engaphezu kwengu-10 zithuthuka, Izesekeli Zomholi zanamuhla zikhula zibe ukukhiqizwa kwempahla eluhlaza, ucwaningo lomkhiqizo nokuthuthukiswa, ukukhiqizwa, ukuthengiswa kwempahla kanye nokuthengisa okusethwe kumkhiqizo owodwa, kanye nezinsizakalo zonke iziteshi zamakhasimende. kufaka phakathi ukuthengwa kweqembu lomphakathi, umgqugquzeli wenkundla yezokuxhumana, umholi wemibono obalulekile, i-E-commerce, ukuthengisa, i-OEM, ukusatshalaliswa, nomthengisi.Yiba umlingani nathi, futhi singakwazi ukusiza ibhizinisi lakho likhule.
Amaqembu asebenzayo ahlinzeka ngamaphakheji anenani elincintisanayo, okuhlanganisa imikhiqizo eminingi, ukwabelana ngolwazi lokumaketha, ukwesekwa kokwethulwa nokubuyekezwa, ukuklama nokuthuthukiswa komkhiqizo, izincazelo zekhwalithi yemikhiqizo, ukusekelwa kokupakisha, ukusekelwa kokuthengisa, amaqembu esevisi yamakhasimende, indawo yokugcina impahla, ukupakisha nezixazululo zempahla, amaqembu okuthumela azinikele, akhelwe ukunikeza isikhathi sokushintsha esisheshayo kuzo zonke izinkinga namathuba.
Izindlu zokugcina izimpahla ezimbili e-United States, eyodwa e-Los Angeles enye e-Wisconsin, egcina i-inventory kahle futhi ihlinzeka ngezixazululo ze-warehousing kanye ne-logistics, ngaleyo ndlela ithunyelwe ngokuqondile nasekhaya iyatholakala, ehlinzeka ngokuguquguqukayo kumakhasimende ethu.
Ifakwe uhlelo lwe-Oracle Netsuite, i-ECCANG ERP, futhi inenkontileka ne-SPS commerce, amasistimu ethu athuthukile nezinqubo zisebenzisa ubuchwepheshe bamuva nokuphatha ukuze zazi ukuthi ungayihambisa kanjani imikhiqizo yakho ngokushesha nangendlela engabizi.